Qala Baby & Child Ukuzilibazisa nokuhamba Baby jika
Kulezi zingane, akukho lutho olungcono kunazo zonke kunokuba ugijimise ngesimo sezulu. a Baby jika ihambelana kahle nale njongo futhi kukhona okwamanje izinhlobo eziningi ezihlukahlukene ongakhetha kuzo. Ngamanje amamodeli kagesi asevele atholakala futhi ngokuvamile kuncike enjongweni ehlosiwe. abanye Baby senhliziyo zisetshenziselwa ukusetshenziswa ngaphandle ngoba ziqinile kakhulu. Ama-models angasetshenzisiwe kuphela ngamantombazane, kepha ngisho nasezingane ezincane kuya kwesisindo se-18 kilogram.
Izinhlobo ze rock
Abazali abaningi basebenzisa le Baby jika hhayi kuphela ngaphandle, kodwa futhi nokusetshenziswa ngaphakathi kwezindonga zabo ezine. Akukhona nje kuphela amamodeli we-classics, kodwa futhi ne-hanger yengane yama-frame ozimele kanye nama-jack rocking. Amanye amamodeli atholakale eneqhwa futhi kukhona namamodeli ngomculo. Ngokuba Baby jika isizinda somculo sithandwa kakhulu, ngoba izingane zijabule nazo. Izingoma ezihlekisayo zifanelekile ukuhleka futhi ezinye izingoma zikhuthaza nokufunda. Ugesi uya ngokuya wathandwa kakhulu rock, Yiqiniso, amamodeli wendlu yangaphakathi kanye namamodeli ensimu angahlukaniswa. Ngamamodeli kagesi, izakhi ze-elekthroniki zivame ukuzwela ngakho-ke azikwenzeli isimo sezulu. Ukusetshenziswa ngaphandle kungavamile swing ezenziwe ngokhuni. le Baby jika ngoba insimu ngokuvamile ihlala isikhathi eside futhi iyakwazi ukumelana nesimo sezulu. Nakuba izinhlobonhlobo ezenziwe ngamapulangwe azithandeki, ukudidiyelwa kwabancane kuthuthukiswa ngokukhululeka ngokukhahlela nokuguqula. Amamodeli efulethini atholakalayo ngezindwangu kanye nemibala ehlukene iyatholakala. Kuyasiza futhi ukuthi lezi zithombe zikwazi ukubeka ngokukhululekile ekamelweni noma zingabanjelwa emnyango. Ngokujwayelekile amamodeli awafanelekile ukusetshenziswa komphakathi. I-electrical rock Kukhona abakhiqizi abahlukahlukene futhi nabo bayatholakala nge vibration noma umculo. Kumele kuqashelwe ukuthi imodeli idinga amabhethri noma ugesi nokuthi amamodeli awafanelekile ngaphandle. Amamodeli kagesi asetshenziswe futhi i-rocker ayidabuli kalula. Ngomculo nokudlidliza, abazali abakhululekile kakhulu futhi izingane zingakwazi ukuthula futhi zilale ngothando.
Indlela yokubaluleka ebalulekile yokuthola Baby jika
Uzoba swing uthenge, khona-ke kumelwe ngaso sonke isikhathi uqale wanqunywa ukuthi ungayisebenzisa kuphi. Kunezibonelo eziningi ezahlukene zokusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle. Ngakho-ke indawo idlala indima ebaluleke kakhulu futhi wonke umuntu kufanele acabangele ukuthi yikuphi Baby jika ukuze ube nendawo. Uma ngabe amamodeli asetshenziselwa ngaphandle, kumele abe ngokuqinile. Amamodeli amahle kakhulu enziwe ngamapulasitiki noma ngamapulangwe. Ngenxa yamakhompiyutha azwelayo, amamodeli kagesi awafanelekile. Futhi, uma uthenga it Baby jika intengo ivame ukubaluleka. Izintengo zamamodeli ngabanye azizona ezibalulekile futhi lezi zingashintsha phakathi kweshibhile kakhulu kanye nengxenye ephezulu yamanani. Yiqiniso akuzona zonke rock eshibhile, kodwa izinga eliphezulu libalulekile. Okunye okumele kuqashelwe ngezinga lokuthenga kuyindlela yokuphatha, njengoba kufanele kube lula njengoba kungenzeka. le Baby jika akufanele kube lula ukugqoka kuphela, kodwa futhi ukugcina okuphephile kwabancane nabantwana kudlala indima ebalulekile. Uma amamodeli aklanyelwe engadini, amane amisiwe ngamathambo. Kubalulekile ukuthi izingwegwe zifakwe ngokuqinile emkhunjini noma ukuthi zifanelekile Baby jika uhlaka. Uma izinhlobonhlobo zisetshenziswa ngaphakathi, zivame ukunikeza ifreyimu. Amamodeli ikakhulukazi kagesi kufanele kube lula ukusebenza futhi akufanele kube khona ukulimaza. Amaningi amaningi atholakale aqinile kakhulu futhi awagcini nje kuphela.
Kungani kunjalo Baby jika ezithakazelisayo ezinganeni?
Isikhathi esilandelayo sokuzalwa sijabulisa kakhulu zonke izingane ezisanda kuzalwa. Akukhona nje ngosuku, kodwa futhi mayelana nemvelo nokukhanya. Usuku nosuku izinsana zikhula ngokushesha futhi njalo into entsha ifundwa futhi itholakele. Izingane ngokuvamile zidinga ukufudumala, uthando kanye nothando. Kodwa kubalulekile ukuthi izingane zikhuthazwe ngendlela edlalwayo. Lokhu kusebenza ngosizo lwe Baby jika kuhle kakhulu futhi uyisibusiso esincane kubazali. Abazali bavame ukukhululeka futhi izingane zisasematasa. Abazali abakhuliswa ngokweqile futhi izingane zingakwazi ukugubha. Ngokuya ngokwakhiwa kwe-swing, izingane zingafakwa ngqo emva kokuzalwa ku- Baby jika ahlale. Ngokuvamile kubalulekile ukuthi indawo yokulala ilungiswe futhi ikhanda kufanele lisekelwe. Kungcono ukuthi indawo yokuhlala ibe okungenani iguquguquke kabili. Isikhathi sokunciphisa isikhwama esisekelwayo, esivunyelwayo sivame ukunconywa izinyanga ezintathu zokuqala. Uma ikhanda lingaxhaswa ngokwanele kwengane, ingcindezi enkulu isetshenziselwa umgogodla. Akusiyo njalo ukuthi kungenzeka ukuthi ifike ku-fol. Ukulimala kufanele kube nokuthengwa kwe- Baby jika bahlonishwe. Izingane ezincane kufanele zibe khona swing hhayi ukuhlala, kodwa nje amanga. Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha okuphikisanayo, uhlaka oluzinzile kufanele lutholakale. Futhi isisindo esivumelekile kufanele sicatshangelwe izingane.
Amathuba nemisebenzi yamamodeli
Ngubani a Baby jika Thenga, kunokukhethwa okubanzi. Awekho imiklamo ehlukene kuphela, kodwa nemiklamo ehlukene. Amamodeli akhula ayazuza kakhulu. Amanothi amaningi anezici ezengeziwe, njengebhodi lezemidlalo noma iselula. Ngokuvamile, amathoyizi amancane noma amathoyizi angaxhunyiwe. Kukhona ngisho nemikhiqizo emele izikhungo zangempela zokuzijabulisa, nomculo, induduzo yemidlalo nokukhanyisa. Okuthakazelisayo ukuthi lokhu ikakhulukazi ezinganeni ezindala ezingazizwa noma zibone izinto. Ukuthuthukiswa kanye namakhono amakhono ekugcineni athuthukiswa. Kubalulekile njalo kubazali ukuthi ukuphepha kubaluleke kakhulu kuzo zonke izimo. Uma kuziwa emshinini noma eklanyweni, ukukwenzisana kungenziwa, kodwa hhayi ngokuphathelene nokuphepha. Uhlelo lwe-5 yokuvimbela amaphuzu noma uhlelo lwe-3 yokuvimbela amaphuzu, isibonelo, kungaba ngumsebenzi obalulekile. Eziningi zalezi zithombe zilungiswa noma ziqhutshwa ngezimoto. Ukuhamba kwe Baby jika bese kwenziwa futhi kukhona namamodeli we-manual weighing. Amanye amamodeli anikezela izembozo ezingasetshenziselwa, ezingenakho ukungcola. abaningi Baby senhliziyo alula futhi ahlanganiswa. Lezi zithombe zilula ukugcina nokuthutha kahle. Ngokuya ngesifiso sabazali, kunemishini ehlukene futhi, okwamanje isabelomali sinendima enkulu. Kukhona ama-model athibhile futhi ashibhile kakhulu. Nge Baby jika ukumemeza kwengane kungashintshwa ukulala. Ngamamodeli, kunomphumela omuhle njengokungena kwezingane futhi izingane zilele. Uma umntwana elele ngesikhathi esithile, ukugwedla kunganciphisa noma kugweme ngokuphelele.
Ulwazi olubalulekile mayelana ne Baby senhliziyo
Akuzona kuphela izingane ezincane Baby jika kumnandi kakhulu, kodwa futhi kubazali. Izingane ziveza injabulo futhi lokhu kuyinto enhle kakhulu. Kuyinto Baby jika ukuze uthole usizo oluhle lokulala, ngoba ngokunyakaza okunciphisa kahle, izingane zilala kahle kakhulu. Ngokuvamile, kuthatha imizuzu embalwa nje ukuthi izingane zilale. evamile izingane senhliziyo zivame ukuhlanganiswa nezihlahla, kumadivayisi angaphandle noma kuzimele ezikhethekile zokuzulazula. le Baby jika kodwa lapha ngokuvamile kunokwakhiwa okuhluke ngokuphelele. Kuvame ukuthi uhlaka oluqinile lapha futhi isihlalo sokuphepha esikhuphile nesiphephile sinamathele. Ngokuvamile, amamodeli afakwa phansi ngaphakathi endlini. Kukhona Baby jika kodwa futhi ngaphandle kokugwedla futhi ngakho-ke kunezintambo ezibonakalayo emigodini, esigxotsheni noma kumadivayisi. Amamodeli angenziwa ngesandla noma ngokugesi. Izinsana zinayo Baby jika njalo umuzwa wokuphepha nokuvikeleka. Ukunyakaza kunomusa kakhulu futhi uzizwa njengesisu esiswini sikamama. Ngenxa yokuthi ukuphepha kubaluleke kakhulu, amamodeli kufanele abe nesignali ye-GS / TÜV futhi lokhu kusho ukuphepha okuvivinyelwe. Abakhiqizi Baby jika bonisa ukuthi yisisindo esiphezulu sini. Amamodeli ngokuvamile ahlala isikhathi eside kakhulu, uma lokhu kuklanyelwe isisindo esingaphezu kwamakhilogremu ayisishiyagalolunye. Amakhansela afanelekile okuphepha anganconywa, njengoba lokhu kuklanyelwe ukuphepha kwemoto Baby jika unomthwalo wemfanelo. Imishini ye-textile kufanele ingabi mahhala futhi lapha futhi, kukhona uphawu lokuvunywa. Abakhiqizi bathi uma izingane zizalwa Baby jika ingasetshenziswa. Ama-rockers amaningi angasetshenziswa kakade ekusaneni, kodwa kubalulekile ukuthi ukusetshenziswa akusekho isigamu sehora ngosuku. Ukuhlanza kufanele kube njengokungathi kunzima ngangokunokwenzeka ngakho-ke, isibonelo, izembozo ezikhishwayo zibalulekile. Indawo ephephile kakhulu ngokuvamile ngoba ukuphakama, izihlalo noma amatafula akuphephile. Uma ingane isimodeli esithile, akufanele ishiywe ingalindelekile.
Isihloko sangaphambiliniingane okugeza
Isihloko esilandelayonesilevu kusilungisi